Muuqaal: Sh. Shariif oo Imaaraadka tagay, Kana hadlay Xiisada Somalia kala dhaxaysa iyo Wariye Hadalkii u diiday | Kalshaale
Muuqaal: Sh. Shariif oo Imaaraadka tagay, Kana hadlay Xiisada Somalia kala dhaxaysa iyo Wariye Hadalkii u diiday
Apr 17, 2018 - 12 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xiisada Siyaasadeed ee xiligan u dhaxeysa Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta.
Sheekh Shariif oo la hadlay Telefishinka Al Carabiya ayaa sheegay in Dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraatka uu ka dhaxeeyo xidhiidh wanaagsan oo soo jireen ah, waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in xal laga gaaro khilaafka hada jira.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa cadeeyay in Dowlada Imaaraarka Caraba si weyn u taageertay dowlada Soomaaliya gacana ka geesatay caawinta shacabka Soomaaliyeed iyo dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab.
HALKAN KA DAAWO MUUQAAL | WARAYSIGA SH. SHARIIF
Waxa uu xusay Sheekh Shariif in labada dal ka dhaxeeyo xiriir ganacsi iyo mid iskaashi, waxa uuna ku baaqay in xiisada la qaboojiyo lagana gaaro xal deg deg ah si uusan xiriirka usii xumaan.
Sheik Shariif runta ayuu sheegay, wuuna ogyahay in Emitares lagu haysto! Maxaad ula xaajooteen gobolada oo runtii ka horeeyay xitaa inta koofur imaan Emitareska, waagii Chaoska iyo qablalayaasha dagaalka Xamar haysteen ayey amninga iyo mashaariic horumarineen ka caawinayeen gobolada nabadda ahaa sida Puntland/Somaliland oo tagi kareen.
Markuu xamar jawi ka howl gelikaraan ka bilowmay waxay ku bixiyeen kharash in Somalia yeelato ciidan adag!
Laakiin kuwii Xamar joogay jacayl Turki iyo Qadar caashan iyo in Dubai ka howlgasho gobolada waxay keentay in lala safto Qadar iyo Turki.
In dhexdhexaad ka noqono arimaha Carabta iyo Turkiga way jabiyeen.
Halkaas ayey arin maraysaa.
Adigu miyaad ogolaan laheyd in caruurtaada lala xaajoodo adigoo joogo, Gobolada ayaan la xaajoon xagey ka jirtaa.
Dowladda Emaaradka hala xaajooto Bombasa ayadoon u soo marin Dowladda Kenya.
Aqli Gaaweeto, waa lagu quudin ee Mish mishta joojiya.
Mahbar waa uun Mahbar.
Puntland soo maahan jufo yar oo Majeerten ah, maxaa keenay in Bakeyle miisaan lala saaro Maroodi.
Dowladda Dalka Galmudug iga dheh,
hadde ogow Maamulka Galmudug waxaa wada dhistey, 4ta Soomaaliyeed marka laga reebo Raxanweyn (Bay iyo Bakool).
Waaba Dabshid quud ka sug!
Mala docotaa in Dubai Quud ka digin Abudubay!
Maxaa igu kalixay in Dabshid quud ka sugo, ms dhul iyo dad la’aan ayaa i hsysa.
Waa kaas aqliga Xamar yaal.
Waxba hs qabsanina, Xamar u nakaa leh, Somalia anaga ayaa ka masuul ah.
Aala kula tahay boowe.
Lacag raadis oo dhan ayaa helay fursad ay wax ku cunaan.Waxan siyaasad lama yidhaa e waxaa la yidhaa siyaasada dhilaysiga.Hadba cidda ay isdiidaan dawlada inaad daba u lusho maaha dadnimo.
Hore ayaan u sheegay in dadkii Ethopiya oo caydh ah u kala dhuumanjiray Emaaraateska u kala hadhidoonin ilaa shaqsi wax fahansan mooyaane.
Ethopiya ayaa Highway iyo Airports noo dhisaysa ayaan u hore uga dhagaystay Mr Gaas oo shacabkiisa warbixin siinaya kkkkkkkkkkkkkk
Calashaan wixii la soo faray ayuu dadka u sheegayay.
Waxan u soo jeedinayaa dadka u nool dagaalka hunguriga inay Emaaraateska isku shubaan.
Halkaa ayay maaanta ka jirtaa fursad qaali kuu ah adiga oo sacabka laga tumayaa.
Reer Dhul Udug in cid quudiso ma rabaan, shalay u halgameen in rag Dabshid ka mid yahay nafta kusoo noqoto Xamar oo dad isku maleeyo.
Calooshiis la cayaar, kkkk
Maanta In baabuur warshado samaysto oo oil iyo gaas lasoo baxo oo qayraadkayga ka faaiidaysto rabaa adiga wax kaa diiyo!
Anigu ku quudin kuye!!!!
Walle reer aan ogahaya guuraan!
Ciidankii 5ta sano imaaraadku Xamar ku tababarayey way qalinjabiyeen kadib tababar nooc walba leh oo ay si isdabajooga u qaadanayeen 5tii sano ee u danbaysay…qalinjabintii waxay noqotay inay shalay bililiqaysteen wixii agab xeradii tababarka yaalay..ayna la kala dhaqaaqeen wixii agab xerada yaalay….waxaa kaloo dad goob jooga ay sheegeen inay qaab qabiil u kala baxeen intay bililiqada socotay…..tababbarkii xeradii weynayd ee Xamar ee mudada dheer tababarku ka socday halkaasay ku soo dhammaatay….
Waxaynu sugnaaba waa qalinjabinta xeryaha Turkigu tababaro goorta ay dhacayso…waxay u badantahay marka tababarka Xeryaha Xamar ee Turkigu bixiyo muddo socoto in sidaasoo kale qalinjabintu ku dhammaanayso bililiqo loo gaysto agabka xeryahaa yaala sida ka dhaxday xeradii tababarka Imaaraadka ee Xamar….
Waxa la isweydiinayaa xeryaha iyo askarta Xamar maxay bililiqo iyo asbaaro ugu qalinjabiyaan, halkii ay askari wax bartay edaab leh u noqonlahaayeen…waa suaal taagan….
Waa wax ugaarahoo askarta Xamar lagu gartaa…
Dusha, adeer markaad Bosaaso & Benaadir ka dhigtay ANNAGA & AYYAGA aqoontaadi maxay tartay? maxaadse libintaadi u siin Dabshid.
Fadlan iskaga noloow emaraadka kuuma baahnin. Waan kaa maranaa.
Sheekh shariif wuxuu agtena ka dhintay maalintii uu federaalka hunguriga somaliya u sharciyeey.
War dalkaan ilaa dad badan qoorta lagawada gooyo weligii mahagagaayo.
LOP, adeer odoyadeeni hore waxay noga tageen dardaaran dhaxalgala & digniin guud oon qabyaaladi ku jirin; Biixiyaha marki aan kajay boqonta taageeda…raggi buurta dheer igala baxay beerka ka ogsooni. LOP adeer markay gaajo daraadeed maydkeenu tubna bannaanada Emiraadku muxuu nagu taray markuu dhintay Aala Nahyaan ILAAHAY HA U NAXARIISTE ka dib? Sow tay Carabi lahayd maha ayyagoo fulina amarki Maraynkanka “Xoolaha Somali waa jirranyihiin ee yaan la qaadan”. Adeer teennu ma waxay ku jaan go’antahay, BAL INAY XUSUUS DARAN YIHIIN XAYDKA KALE MOOGE. Adeer xifaala qoysqoys waa hakiise YAANAN abaal ka dhicin oo aanan simin kii ii gargaaray & kii markaan liitay dhabarka ii jeedshay. WBT